Zonke wobulili fair ufuna zibukeka zizinhle nokuthi walishaya lonke amadoda ngendlela ebukeka ngayo. Kanti abesifazane abaningi bazimisele ukunikeza konke banayo sibalo amahle encane, okhalweni mncane, hip and Chic izibunu nokunwebeka. Kodwa yini okufanele uyenze uma izinkinga isisindo kuyindawo ukuba? Futhi ngaphezu kwalokho, ngiye ngazama zonke izinhlobo Ukudla nokuqeqeshwa kanzima, kodwa lutho kodwa ukukhathala uhlale ezimbi zomzimba, lezi zindlela ziye hhayi wayeyamukela imibono yabanye. Bese indlela ukunciphisa umzimba ngenyanga ezedlule 10 kg, uma amandla nethemba asishiywa?
Imibuzo Yiqiniso, mass, kodwa izimpendulo khona. Okokuqala kumele bakuqonde ukuthi lokhu ukuze ulahlekelwe isisindo 10 kg izinyanga 2 noma inyanga, kuyodingeka sizame esiphezulu. Kubalulekile ukuqaphela iqiniso ukuthi yini kungenzeki ngokushesha futhi kalula. Ngisho nalapho umuntu ophethe ukuqeda inombolo oyifunayo amakhilogremu ngesikhathi esifushane, bese cishe, ngemva isenzakalo esijabulisayo enjalo kufika mzuzu ukudumala, ngoba:
Isikhumba ku esiswini, amabele, nezinqulu droop futhi babe flabby, futhi lokhu kusho ukuthi akukho umbuzo ubuhle.
Rapid kwesisindo ngaphandle ukunakisisa izimpawana kuholela okufanayo okusheshayo kwesisindo ngemva ekudleni.
Ngakho-ke, zonke lezi imiphumela akazange abonakale ngokucacile ukuqaphela kanye ukuhambisana nayo yonke imithetho ngesikhathi kwesisindo. You azi ukuthi kwesisindo awulona ilungu elilodwa kuphela super Ukudla. Kuhlanganisa ezehlukene zemisebenzi oluhlose ukunciphisa isisindo sakho: ukudla, ukuvivinya umzimba, izinqubo ezengeziwe. Ake namanje zama ukuthola indlela ukunciphisa umzimba enyangeni edlule ngo-10 kg, kodwa kunalokho uzoqala ukuba ulahlekelwe isisindo.
Ukudla ngesikhathi kwesisindo liphuma busobala. Kufanele uqaphele ukuthi zonke izinhlobo ukudla okusheshayo, okuthosiwe, ukudla okubabayo kanye okunamafutha kufanele uhlale esikhathini esidlule. Ingabe ukukhipha ukusetshenziswa iziphuzo ezibandayo.
Ekuseni, kufanele adle yini yobisi. Into wukuthi imikhiqizo yobisi ekuseni isikhathi umuzwa satiety. Kodwa ngaphezu imikhiqizo yobisi kufanele baphuze ingilazi ubhamubhamu juice udle 200 amagremu nokunye okufana nokolweni iphalishi noma Muesli, egcwele ubisi.
Ngezinye kwasemini, kufanele udle i-apula noma aphuze ingilazi yogurt.
Ngesikhathi sokudla kwasemini, ungakwazi ukupheka esiphundu side dish amazambane noma ezinye imifino, futhi isaladi. Kodwa kubalulekile ukukhumbula ukuthi yini ethosiwe namafutha akufanele kube. Ngakho-ke, kufanele noma ubilise noma ibila imikhiqizo yakho. Ulethisi, ngokwemvelo esetshenziswa ifomu ongahluziwe. Khumbula, futhi inani lokudla kudliwa - usayizi bakhonze kufanele kube ncamashi izikhathi ezimbili ngaphansi kuka lapho yayikhona ngaphambi kokuthi ithole ukudla.
Ngezinye kwasemini ungakwazi uphuze inkomishi yetiye oluhlaza, badle izithelo ezithile. Kodwa ukudla kwakusihlwa akufanele badle nokudla okunezinga eliphezulu le-fiber. Dinner kufanele kube kungakapheli amahora amathathu ngaphambi sokulala.
Njengoba ubona, akukho ukulinganiselwa esiqinile, into ebaluleke kakhulu - ukuqeda okunamafutha, okubabayo futhi okunama-kilojoule amaningi ukudla. Kubalulekile ukudla ukudla okunempilo futhi fresh, futhi akulula ukuthi silungiselela futhi inuka okumnandi.
Kazi, indlela ukunciphisa umzimba ngenyanga ezedlule 10 kg ngaphandle ukunyakaza? Mhlawumbe - lokhu akunangqondo, ngoba kunzima ukuthola ngenkuthalo "hamba" yokujama tsi of fat umzimba, wekumane ukudla kancane. Movement kuzokusiza. Awunayo ukuthenga ukubhalisa a club imfanelo, ngoba konke ongakwenza ngokwakho. Uzodinga okokufundisa noma DVD ne uhlelo oluthile lokuvivinya umzimba isikhathi esithile free. Uma ukuthola kunzima ukuhambisa noma ingabe bazihlukanise ukunyakaza, ungakhetha uhlelo lokuzivocavoca ezifana Pilates noma callanetics. Lezi zinhlobo umsebenzi angadingi wena eziningi umzamo, kodwa umphumela kuzobonakala. Akubalulekile nje inani ezinikezwa i umsebenzi, kodwa izinga layo. Konke kwenziwa elinganisiwe futhi ngokucophelela. Kuwufanele benaka ukuphefumula futhi bazizwa ukunyakaza kwabo zonke. Uzobona, nje kwamasonto ambalwa ukuqeqeshwa kuzodingeka ukuhlola imiphumela yokuqala. Futhi uyokwazi ukuqonda ngqo ukuthi ukunciphisa umzimba ngenyanga ezedlule 10 kg, ngoba wena-ke ngeke kusaba inkinga.
Umbuzo ka kanjani ukuba ulahlekelwe isisindo 10 kg e izinyanga 2 (noma ngisho inyanga) ngawe zinyamalale nje lapho ufunda isinyathelo esilandelayo - izinqubo ezengeziwe. Khumbula ukuthi ukusiza umzimba wakho ohlanziwe amanoni yokujama tsi we slag kumele kube wonke umzamo. Ngakho-ke, hamba umthetho ukuhambisana phakathi ngenyanga noma ezinyangeni ezimbili, isimiso esikhethekile umzimba wakho:
Kanye ngesonto okugeza nedili lomshado nabo amafutha yemvelo ebalulekile ezisawolintshi nomcako akhiphe izinto zokusetshenziswa.
Kanye ngesonto, ukugeza ngezinsalela uLwandle Lukasawoti.
Kabili ukugoqa masonto onke. Ukuze wenze lokhu: ukudla ifilimu, ikhambi okhethekile cellulite noma indlela kwesisindo. Lokhu kusho ongazilungiselela. Ukuze wenze lokhu, uhlanganise uju lime (noma iyiphi enye) ubisi abilisiwe.
Douches - nsuku zonke.
Massage okhalweni nezinqe cleaner izimbiza. Lena indlela enhle kakhulu futhi ephumelelayo ukuqeda cellulite.
Mhlawumbe, ngemva amathiphu enjalo emangalisayo wena akufanele ube nenkinga yokukholelwa - indlela ukunciphisa umzimba ngenyanga ezedlule 10 kg? Kusukela izimpendulo ke, wena ngiyitholile.
Imfihlo "Wik Society" Decembrists: a Umculu wenchubomgomo, inhloso abahlanganyeli